HETSIKA ARA-TOEKARENA : Hotontosaina amin’ny faran’ ny volana ny foarabe lojy
Ny 28 sy 29 ary 30 jolay izao no hanaovana any Ambondromamy ny foarabe Lojy mitsangana andiany faharoa. Ny tanjona dia ny hifaneraseran’ireo mpisehatra rehetra eo amin’ny sehatrasa lojy. Tsy ny lojy ihany fa ny voamaina rehetra no omena toerana amin’izany. 24 juillet 2017
Tsy mitsaha-miakatra ny tsenan’ny lojy malagasy eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena. Raha 381 000 000Ariary no lafo tamin’izany tamin’ny 2015 dia niakatra 772 000 000 Ariary tamin’ny 2016 ary 1 150 000 000 Ariary tamin’ny 2016-2017.
Anisan’ireo vokatra mitana ny laharana voalohany eto amin’ny Faritra Boeny ny lojy. Tafiditra indrindra amin’ireo famokarana mitodika amin’ny tsena ny lojy miaraka amin’ny katsaka sy voanjo. Nanaovan’ny ministera ezaka maro ny famokarana eny ambanivohitra ka nametrahana teknisianina maro eny ifotony. Narahina maso sy nampanarahina fenitra ihany koa ny fampiasana fanafody biby.
Anisan’ny manohana io sehatrasa io ny Prosperer sy ny Antenimieran’ny varotra na Chambre de commerce. Ary ny lehiben’ny Fmihitsy no lohalaharana amin’ny fitantanana sy fandrindrana ny sehatrasa haharitra sy hanara-penitra. Entina hanatsara ny fiainan’ny tantsaha eny ifotony sy hanatsarana ihany koa ny fidiram-bolan’ireo vondrom-bahoakam-patitra ny foarabe. Asaina handray anjara amin’io foarabe io ny rehetra ary entanina ihany koa ny daholobe hitsidika azy io. Fomba hanohanana io sehatrasa io avokoa izany ary hanatsarana hatrany ny kalitaon’ ny asa sy ny vokatra.